हाम्राे पिपलबाेट » नागरिकता अध्यादेश : मधेसमा भण्डारी, ओली र ठाकुरको जयजयकार, दिपावली मनाइयो नागरिकता अध्यादेश : मधेसमा भण्डारी, ओली र ठाकुरको जयजयकार, दिपावली मनाइयो – हाम्राे पिपलबाेट
नागरिकता अध्यादेश : मधेसमा भण्डारी, ओली र ठाकुरको जयजयकार, दिपावली मनाइयो
जनसिद्ध नागरिकका सन्तानले पनि बंशज नागरिकता पाउनेगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश ल्याएपछि अहिले मधेसमा जताततै उनको प्रशंसा सुरु भएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षको पहलमा राष्ट्रपति भण्डारीले आइतवार नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिन् । यो समाचारले लाखौं मधेसी खुसीले गदगद भएका छन्, जो नागरिकताबाट बर्षौदेखि बञ्चित थिए । अब उनीहरु सहज रुपले नागरिकता पाउने भएका छन् ।
नागरिकता अध्यादेश ल्याएको खुशियालीमा जसपा महन्थ ठाकुर पक्षका नेताहरुले जनकपुरको जनक चोकमा आईतवार साँझ दिपावली नै गरे । दिप प्रज्वलन गरी राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओली र जसपा अध्यक्ष ठाकुरलाई उनीहरुले धन्यवाद दिएका छन् ।
नागरिकता समस्या समाधान गर्न विगत लामो समयदेखि जसपाले पहल गरिरहेका थिए । धनुषा २ बाट निर्वाचित साँसद उमाशंकर अरगरियाले त नागरिकता समस्या, मधेसीमाथि लगाएको मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनका लागि कित्ता नै परिवर्तन गरे । हुन त उनलाई अहिले पनि आफ्नो पक्षमा तान्न उपेन्द्र यादव पक्ष लागेका छन् । तर उनले मधेसीको माग पुरा गराउने र गर्नेसँग मात्र सम्झौता गर्ने अडान लिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट मधेस आन्दोलनका बेला कैयौं कार्यकर्तामाथि लगाएको मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधन गर्ने कुरामा सहमती गराउनमा साँसद अरगरिया, जसपाका बरिष्ट नेता राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरुले अहम भुमिका खेलेका छन् ।
जसपाका युवा नेता प्रशान्त झाले लेखेका छन् :
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रधेय मा. महन्थ ठाकुर ज्यू एवं जसपा नेपालको संसदीय दलको नेता आदरणीय मा. राजेन्द्र महतो ज्युको मधेशी मुद्दा प्रतिको अडानको प्रतिफल आज करीब ५ लाख मधेशी नागरिकको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको सोको उपलक्ष्यमा जनकपुरधामको जनक चौकमा दिप प्रज्वलन गरियो ।
सबैमा हार्दिक आभार ।
१० जेष्ठ २०७८ मा प्रकाशित